Updated: 2016-06-21 15:36
ဒိုင်းတိုးခု ဥအဲနို မှာ ရှိ တဲ့ ပန်းခြံ ကြီး ( အကျယ် ５３㎡) ။ အတိုကောက် ဥအဲနို ပန်းခြံ လို့ ခေါ် ဆို ကြပါတယ် ။ ပန်း ခြံ တွင်း မှာ ဆိုရင် တိုကျို အမျိုးသားပြတိုက် ၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု ပြတိုက် ၊ သိပ္ပံ ပြတ...
Updated: 2016-06-14 14:19
ခါနော့ရ နှင်းဆီပန်း ဥယာဉ်
( ခါနော့ရ နှင်းဆီပန်း ဥယာဉ် )၈ ဟတ်တာ ရှိ တဲ့ ကွင်း ပြင် ကြီး ထဲ မှာ အပင်းပေါင်း ၅ သောင်း ကျော်ရှိ တဲ့ နှင်း ဆီ ပင် တို့ ကို စိုက်ပျိုး ထား သော ဂျပန် နိုင် ငံ ထိပ် တန်း ၀င် နှင်း ဆီပန်း ခြံ တစ် ခု ပဲြ...
Updated: 2016-06-09 09:29
အိရှိဘရှိ အမှတ်တရ ပန်းခြံ
ခဂို ရှိ မား မြို့ ရဲ့ အလယ် ကို စီး ဆင်း တဲ့ ကိုစွတ်ခိ မြစ် ဟာ အဲဒိုခောတ် ဦး ဟိဂေါ ခောတ် နှောင်း ရဲ့ မဲအိရှိခု ( အိဝနာဂစန်းဂေါရော ) က ဦး စီး ပြီး တည်ထားဆောက် လုပ် ခဲ့ တဲ့ အာ့ခ်ျ ကျော...
Updated: 2016-05-24 13:17
ဖုခုအိုးက မြို့ ရဲ့ အလယ် ပိုင်း လောက်မှာ တည် ရှိပြီး မြို့ ပြ ရဲ့ မွန်းကျပ် မှု တွေ ကို ဖြေဖျောက် ပေး နိုင်တဲ့ အိုအေစစ် တစ် ခု လဲ ဖြစ် တဲ့ ပန်း ခြံ တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။ သမိုင်း ကြောင်း အနေန...
Updated: 2016-04-28 16:42
ရှူး ရိ ရဲ တိုက် ပန်း ခြံ ( ရှူး ရီ ရဲ တိုက် )
ရှူး ရိ ရဲ တိုက် အစရှိ တဲ့ ကမ်ဘာ့ ယဉ် ကျေး မှု အမွေ အနှစ် စာရင်း သတ် မှတ် ခံ ရတဲ့ သမိုင်း ၀င် ရှူး ရီ ရဲ တိုက်ပန်း ခြံဟာ ရဲ တိုက် ကြီး ကို အထူး ပြု ပြီး တော့ အခပေး ၀င် ရတဲ့ အပိုင်း နဲ့ အခ မဲ့ ၀င် လို...
Updated: 2016-04-19 14:29
ခါဂိုရှိမား ပန်း ခြံ
၃၆.၅ဟတ်တာ တောင် ကျယ် ၀န်း တဲ့ ခါဂို ၇ှိမား ပန်း ခြံ စာ ခိုင်းမွန်း တောင် ကုန်း ကို ရှု ခင်း လို့ လုပ် ထား ပြီး ပန်း လွင်ပြင် တွေ ခင်းကိုး ကမ်း ညေခ ကို တစ်ဆုံး မြင် နိုင် တဲ့ ရှု ခင်း ကြည့် နေရာ...